NGO Forum - Nepal - देखिन थाल्यो हैजा NGO Forum - Nepal - देखिन थाल्यो हैजा
देखिन थाल्यो हैजा
काठमाडौं : राजधानीको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा शुक्रवार यो मौसमको पहिलो प्रयोगशाला प्रमाणीत हैजाको रोगी देखिएको छ । अस्पतालका क्लिनिकल रिर्सच युनिटका अनुसार कलंकी बस्दै आएकी ५६ वर्षीया महिलामा हैजाको '०१ ओगावा' प्रजाति देखिएको हो । बनेपा घर भएकी उनको चिकित्सकीय इतिहास अनुसार उनी एक वर्षदेखि उपत्यकाबाहिर गएकी छैनन् । समयमै उपचार गरे मृत्युदर करिब शुन्य रहेको हैजा/झाडापाखाला हैजाबाट २०६६ मा जाजरकोट, रुकुमलगायतका पहाडी क्षेत्रमा सरकारी तथ्याँक अनुसार ३ सय ५४ भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।
'एक दशकभन्दा बढी समयदेखि वर्षेनि गर्मी यामयताका उपत्यकामा प्रयोगशाला प्रमाणीत हैजा देखिँदै आएको छ' टेकु अस्पतालका डा. राजेश साह भन्छन 'अब खानपानमा विशेष र्सतर्कता आवश्यक छ ।' अनियन्त्रित रुपमा चौलानीजस्तो पातलो दिसा हुने रोगलाई झाडापखला भनिन्छ । एक्कासि हुने पखला केही घन्टादेखि केही दिनसम्मरहन सक्छ । पखाला लाग्दा पेट दुख्ने, ज्वरो, रिंगटा र वान्ता पनि हुन सक्छ । असर बढे तरुन्त चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ । नत्र शरीरमा पानीको कमी भई ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । अमेरिकन कलेज अफ ग्यास्ट्रोइन्टरोलजीका अनुसार शरीरले गुमाएको पानी थप्दै जानु यसकोमुख्य उपचार हो । हैजाबाट आत्तिनुपर्ने स्थिति भने नरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । यसका विरामीको शरीरबाट झाडापखलाका माध्यमले नशामा भएको पानी र लवणलाई तुरन्त परिपूर्ति गरेर सपलतापूर्वक उपचार गर्न सकिन्छ । वान्ता नगर्ने रोगीहरुलाई मुखबाट पुनजलीकरण (ओरल रिहाइड्रेसन) गरेर उपचार गर्न सकिन्छ । अत्यन्त विग्रिएको स्थितिमा नशाबाट पानी चढाएर शरीरमा पानी र लवणको मात्रा स्थिर गर्न सकिन्छ । 'पेट र मलद्वारमा तीव्र पीडा, ज्वरो, दिसामा रगत, शरीरमा पानीको कमीजस्ता लक्षण देखिएको छ र तीन दिनभन्दा बढी समय सम्म पखला लागिरहेको छ भने तुरुनट चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ' टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुन वताउँछन् । उनका अनुसार बालबालिकाको हकमा भने झाडापखला देखिएको पहिलो दिनमै चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक हुन्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार झाडा पखलाबाट बच्ने सवैभन्दा राम्रो उपाय प्रदूषित खाद्य पदार्थ पानीबाट टाढा रहनु हो । खुला कुवा र हयान्ड पम्पको पानी पनि उमालेर खानपर्छ खाना खानुअघि र शौचालय गएपछि हात सावुनपानीले धुन विर्सनुहुन्न । भाँडाकुँडा नियमित रुपमा सफा गर्नुपर्छ त्यसै थन्क्याइएको फा भाँडामा समेत व्याक्टेरियाका हमला हुन सक्छ । अमेकि स्वास्थ्य संस्था सिडिसीका अनुसार सरसफाईमा कमी भएको ठाउँमा हेजाको महामारी तत्काल रोक्न सकिँदैन । वर्षोनि २२ लाख व्यक्तिको मृत्यु झाडापखला, हैजालगायतले हुने र ती मध्ये अधिकाँश बालबालिका भएको डव्लुएचओले उल्लेख गरेको छ । यस्तो मृत्यु अधिकाँशत विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको छ । डव्लुएचओले झाडापखालाको ८८ प्रतिशत कारण असुरक्षित पानी, अपार्याप्त सरसफाई र स्वच्छताको कमी रहेको जनाइएको छ । सरसफाईमा सुधारले झाडापखलाले हुने मृत्यु ३२ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । खाने पानीको गुणस्तरमा सुधारले झाडापखलाबाट हुने मृत्युदर ६ देखि २५ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ । स्वच्छ पानी, सरसफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, हात धुनुजस्ता स्वास्थ्य शिक्षाले ४५ प्रतिशतसम्म झाडापखलाको केस कम गर्न सकिने डव्लुएचओले जनाउँदै आएको छ । हैजा, झाडापखलाबाट बच्न प्रकोप फैलिएको मुलुकको अन्य भागसहित मुख्य रुपमा उपत्यकावासीलाई उम्लिएर चिसो गरेको पानी र स्वच्छ खाना खानुपर्छ ।
स्रोत : कान्तिपुर दैनिक, ०६८ बैशाख १७, पेज नं. ११